जापान​मा प​हिलो प​ट​क सेलेब्रिटीको लागि इन्ट​र​नेश​न​ल​ अवार्ड​ | Rajmarga
जापान​मा प​हिलो प​ट​क सेलेब्रिटीको लागि इन्ट​र​नेश​न​ल​ अवार्ड​
जापान​मा प​हिलो प​ट​क सेलेब्रिटीको लागी इन्ट​र​नेश​न​ल​ अवार्ड​ आयोज​ना हुने भ​एको छ​ । इन्टरनेशनल इन्टरटेनमेन्ट कम्पनि​ सुर्य कर्पोरेसनले जापानको टोकियोमा अवार्ड शो आयोजना गर्न ग​र्न​ लागिएको हो ।
लामो समय देखि आन्तरिक कसरतमा रहेको कर्पोरेसनले आज मात्रै पहिलो ब्यानर सार्बजनिक ग​र्दै अवार्ड​को घोष​ना ग​रिएको हो । डान्स​, कमेडी, गाय​न​ र​ अभिन​य​ विधामा र​हेर​ अवार्ड​ आयोज​ना हुनेछ​न् । बिश्व​कै स​बै भ​न्दा ब्य​स्त​ र​ म​हँगो श​ह​र​ टोकियोमा अहिले स​म्म​कै ठुलो साँस्क्रितिक कार्य​क्र​म​ बिच​ अवार्ड​ संन्चाल​न​ हुने आयोज​क संस्थाका बासु देव​ लामिछानेले ब​ताएका छ​न ।
अवार्डमा नेपालबाट नया पुराना ख्याती प्राप्त कलाकार हरु टोकियोको एकै स्टेजमा ज​म​घ​ट​ हुनेछ​न् । बिश्वोको सबैभन्दा महँगो अनि व्यस्थ शहर टोकियोमा हुने अवार्ड शो पपुलर अवार्ड अन्तर्गतको अवार्ड रहेको बुझिएको छ । सुर्य इन्टरनेशनल अवार्ड नाम दीइएको अवार्ड​मा नेपाली चलचित्र र संगीत दुवै विधामा नोमिनेसन छनोट गरि अवार्ड वितरण गरिने आयोजक पक्षले बताएको छ ।
चलचित्र र संगीत गरि जम्मा १२ विधामा ५/५ नोमिनेसनमा रहने ब्य​व​स्था रही अनलाइन भोटिंग सिस्टमको आधारमा अवार्ड वितरण गरिने आयोजकको भनाइ छ । सेप्टेम्बर १६ मा नाकानो जेरो हलमा स​भ्य​ र​ भ​ब्य​ अवार्ड​ ग​रिने त​यारी भ​ईर​हेको बासु देव​ लामिछानेले ब​ताईएको छ​ ।
Previous post: पुरुषको रोजाइमा २० वर्षे यौनसाथी, महिलाले किन रोज्छन् पाको पुरुष ?
Next post: आफ्नो भन्दा अर्काको श्रीमान नै रोज्दा रहेछन महिलाहरु किन ?
एनआरएनए अध्यक्ष भट्टद्धारा अनाथ बालबालिकालाई आर्थिक सहयोग
इलाम समाज यूके द्घारा “इलाम हाम्रो पहिचान” नामक वृतचित्र सार्वजनिक
अमेरिकामा नेपालीको लगानीमा शुरु हुँदै Community बैङ्क
तामाङ समाज अमेरिकाको प्रथम अधिवेशन सम्पन्न : अध्यक्षमा सानुमाया तामाङ निर्वाचित
नेपाल आईडल अमेरिका आउने